वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : शौचालयको कुरा, बानी बदल्ने कुरा
शौचालयको कुरा, बानी बदल्ने कुरा
एघार दिन घर्केर गईसकेछ गाँठे पछिल्लो पोष्टपछि!
(ढिलै भएपनि) यहाँहरु सबैमा नव वर्ष २०१२ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु।
लेख्ने विषय कति मिलेका थिए कति, भ्याए पो! ति मध्ये पनि विशेष गरी उत्तर कोरीयाली तानाशाह किम जोङ्ग इलको मृत्यु र त्यहाँको मध्ययुगीन-सामन्ती सत्ता हस्तान्तरणका बारेमा केहि लेख्ने मन थियो। यसपछिका कुनै पोष्टमा भए पनि लेख्नेछु।
२०११ को अन्तिम दिन साँझ (पोखराको) लेकसाईडको सडक महोत्सब हेर्न पुगिएको थियो सपरिवार। सडक महोत्सब रमाईलै थियो, भिड पनि उल्कानै थियो र साँझ छिप्पिएर रातमा बदलिँदै जाँदा भिडको बाढी निरन्तर बढीरहेको थियो। पर्यटनमय पोखरा यतिखेर नि:सन्देह पर्यटकमय थियो। देशमा शान्ति-सुरक्षा बढ्दै जाँदा यो भिड बढ्ने निश्चित छ, र त्यसका लागि पर्यटन उद्योगलाई अझ सम्पन्न र व्यवश्थित बनाऊन जरुरी भईसकेको छ। पर्यटन उद्योगलाई कुनै छुट्टै चरीको नामजस्तो गरेर हेर्दा यसलाई विकसित र व्यवश्थित बनाउन सकिन्न, यसलाई प्रकृति संरक्षण, भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, आधुनिक सुविधाहरुको उपलब्धता र सुसंस्कृत मानवीय गुणको संयोजनका रुपमा समग्र रुपमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ।
नेपालका शहरहरुको सबैभन्दा ठूला समस्याहरु मध्ये एक पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयहरुको अभाव पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तै अभाव त्यो साँझ पनि अलि-अलि झेलियो। आफूले भए त केहि समय सहिन्थ्यो होला, तर छोरीलाई पनि त्यसै गर्न भन्न सकिएन। खाना खाने बेला भईसकेको पनि थिएन, नत्र त खान पसेकै रेष्टुरेण्टले काम चल्थ्यो होला। पिसाब गर्नकै लागि मात्रै कुनै रेष्टुरेण्ट पनि के पस्नु!
लेकसाईडमा सार्वजनिक शौचालय (तालबाराही मन्दिरतिर जान) डुंगा चढ्ने घाटमा मात्रै छ। सडक महोत्सबमा लेकसाईडमा लोड शेडिङ्ग हुँदैन तर त्यो घाट भने अँध्यारै थियो, दुई-तीन मधुरा सडकबत्तीहरु मात्रै टिल्पिलाईरहेका थिए। त्यहाँ पुग्दा पुरुष शौचालयमात्रै खुला थियो र त्यहाँ बसेका भाइहरुले आफ्नै हिसाबले महिला र पुरुष दुबैका लागि त्यसको व्यवश्थापन गरिरहेका थिए। उनीहरु एकचोटि पुरुषहरुको मात्र समूहलाई भित्र पठाऊँथे, अर्को चोटि महिलाहरुको मात्र समूहलाई। यसरी 'पालो प्रथा' थियो शौचालय जाने:)
पछि घर फर्कने बेला फेरि छोरीले पिसाब गर्छु भनी। त्यतिखेर अलि परै पुगिसकिएकोले फरि भिड छिचोलेर घाटमै जाने आँट गर्न सकिएन र पछिल्तिरको चउरलाईनै बनाईयो शौचालय। यो 'खुल्ला आकाशमुनिको शौचालय' प्रयोग गर्ने भिड ठूलै थियो र त्यो भिडको आकार पनि बढीरहेकै थियो।
सडक महोत्सवले सडकमै प्रशश्त फोहरपनि उत्पादन गरीरहेको थियो। फोहरहरु फ्याँक्नका लागि ढ्वाङ्गको व्यवश्था भने एकदम कम थियो। पोहरको सडक महोत्सव र पोखराका अरु केहि महोत्सवहरु पनि हेरेको छु मैले तर यो फोहर फाल्ने ढ्वाङ्गहरुको अभाव भने जहाँ पनि देखिन्छ। यो 'सानो' कुरामा ध्यान दिन सके यस्ता रमाईला महोत्सवहरु सुन्दर पनि हुने थिए।
शौचालयकै कुरा अर्को एक प्रसंगमा पनि। जापानबाट केहि पारिवारिक मित्रहरुको समूह आएको थियो। उनीहरुसंग भेटघाटका लागि ५ तारीख साँझ फेरि पुगियो लेक साईड। खानपीनको कार्यक्रम थियो एउटा नाम चलेको रेष्टुरेण्टमा। गान बजान सहितको रेष्टुरेण्ट, त्यहाँको खाना आदि कुरा सबै स्तरीय थिए, तर शौचालय भने खत्तम! कुन्नि कता हो पढेजस्तो लाग्थ्यो, समाजको सभ्यताको स्तर त्यहाँका शौचालयहरुले देखाऊँछन् भनेर। यदि यस्तै हो भने, हामीचाहिँ ढुंगेयुगकै स्तरमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
अनि अस्ति शुक्रवार कोरीयाको पुसान विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरुको टोलीसंग एउटा अन्तर्कृया कार्यक्रम थियो। आयोजक थिए पोखरा विश्वविद्यालय र नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोशिएसनको पोखरा केन्द्र। एकजना प्रोफेसरले आफ्नो वक्तव्यमा विकासको कोरीयाली अनुभवलाई समेट्दै 'पैसा नहुँदैमा केहि पनि गर्न नसकिने होईन, आफ्नो चिन्तनशैली र बानीलाई बदलेमात्रै पनि धेरै गर्न सकिन्छ।' भनेर भनेका थिए। पछि एकजना नेपाली श्रोता मित्रले 'ल मैले बानी त बदलें रे, देशभक्त र ईमान्दार त भएँ रे, तर पैसा नभई मैले के गर्न सक्छु त?' भन्ने सारको आफ्नो लम्बेतान प्रश्न राखे।
'अवश्य धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, सडकमा फोहर नफाल्न वा सडक मिचेर घर नबनाऊन तपाईँलाई पैसा आवश्यक पर्छ? अवश्य पर्दैन। त्यहि हो विकासको शुरुवात---।' आत्मविश्वाशी कोरियाली प्रोफेसरको जवाफ पछि ति मित्र र हामी सबै नाजवाफ भएर शिर निहुरायौं।
२०११ र १०१२ को दोसाँधले मलाई सिकाएका पाठ यिनै हुन्। तपाईँलाई नि?
Posted by Basanta at 5:20 PM
Aakar Anil January 8, 2012 at 5:25 PM
सार्वजनिक शौचालयको समस्या नेपालमा सबै तिर नै छ ! र भएका पनि साह्रै खत्तम छन् भन्दा फरक पर्दैन ! ब्लगको अन्तिम तिर रहेको, कोरियाली प्रोफेसरको कुरा चाँहि साह्रै चित्त बुझ्यो !
kshama January 8, 2012 at 5:51 PM
A very,very Happy New year to you!
Arati January 9, 2012 at 9:36 PM
सार्वजनिक सौचालय नहुँदा स्वास्थमा पनि असर परि रहेको छ जस्तो लग्छ किनकी हामी घरबाट निक्लदाँ पिसाबले च्याप्छ भनेर पनि थोरै खाएर निक्लने गर्छौ।
Luna January 11, 2012 at 6:03 AM
-- सडकमा फोहोर नफाल्न -- सडक मिचेर घर नबनाउन --
तपाईलाई पैसा पर्छ ??? -- अबश्य पर्दैन !
त्यहि हो बिकासको शुरुआत ----
मेरा बीपीमय दिनहरु-२
शहर र देश